निप्पोन पेन्टका रंग नेपाली बजारमा
फागुन २३, २०७६, शुक्रबार
काठमाडौं । निप्पोन पेन्ट नेपालको सवारी–साधन पेन्टको बजारमा प्रवेश गरेको छ । कारोबारको आधारमा एसियामा अग्रणी रङ उत्पादक निप्पोन पेन्टले नेपालको सवारी–साधन खरिदपछिको बजारमा आफ्ना रङहरू उपलब्ध गराउन...
कुमारीका र बेबि शेरामी नेपालमा विक्री शुरु
काठमाडौं । कपाल र बालबालिकाको हेरचाहका लागि प्रशिद्ध ब्राण्ड कुमारीका र बेबि शेरामीले नेपालमा विक्री शुरु गरेको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल, हेमाज म्यानुफ्याक्चरिङका निर्देशक रोय जोसेफले उक्त ब्राण्डका नेपाल...
अब बैंकमा सुन राखे ब्याज पाइने, कसरी पाइन्छ ब्याज ? (नियमसहित)
फागुन २२, २०७६, बिहिबार
काठमाडाैं । अब बैंकमा सुन राखेर ब्याज पाइने भएको छ । बिहीबार राष्ट्र बैंकले बिहीबार वाणिज्य बैंकहरुलाई निर्देशन जारी गर्दै सुन निक्षेप योजना सुरु गरेको हो । राष्ट्र बै‌कले कम्तीमा ३ वर्षदेखि बढीमा ५ वर्षस...
सुनको मूल्यमा झनै नयाँ रेकर्ड, हेर्नुहोस् कति छ आजको भाउ ?
काठमाडौँ । साताको पाँचौँ दिन अर्थात बिहीबार पनि सुनको मूल्यले नयाँ रेकर्ड कायम गरेको छ। सुनको मूल्य आज प्रतितोला २ सय रुपैयाँले बढेको ८१ हजार नजिक पुगेको छ। आज छापावाल सुन प्रतितोला ८० हजार ७ स...
काठमाडौँ । आज (बिहीबार) अमेरिकी डलरलगायत अन्य केही देशको विनिमयदर घटेको छ। आज नेपाल राष्ट्र बैँकले १ अमेरिकी डलरको खरिददर ११६ रुपैयाँ ८६ पैसा र बिक्रीदर ११७ रुपैयाँ ४६ पैसा तोकेको छ।&nb...
सुनमा अहिलेसम्मकै नयाँ रेकर्ड, कति पुग्यो आजको भाउ ?
फागुन २१, २०७६, बुधबार
काठमाडौँ । साताको चाैथाे दिन अर्थात बुधबार सुनको मूल्य ह्वात्तै बढेको छ। आज छापावाल सुन २ हजार २ सय रूपैयाँले बढेर नयाँ रेकर्क कायम गरेकाे हाे । आज प्रतितोला ८० हजार ५ सय रुपैयाँमा क...
काठमाडौँ । आज (बुधबार) पनि अमेरिकी डलरलगायत अन्य केही देशको विनिमयदर बढेको छ। आज नेपाल राष्ट्र बैँकले १ अमेरिकी डलरको खरिददर ११६ रुपैयाँ ९८ पैसा र बिक्रीदर ११७ रुपैयाँ ५८ पैसा तोकेको छ। ...
फेरि उकालो लाग्यो सुनको मूल्य, हेर्नुहोस् कति छ आजको भाउ ?
फागुन २०, २०७६, मंगलबार
काठमाडौँ । साताको तेस्रो दिन अर्थात मंगलबार सुनको मूल्य बढेको छ। आज छापावाल सुन प्रतितोला ३ सय रुपैयाँले बढेर ७८ हजार ३ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। ह...
ह्वात्तै बढ्यो अमेरिकी डलरको भाउ, कुन देशको कति ?
काठमाडौँ । आज (मंगलबार) अमेरिकी डलरलगायत अन्य केही देशको विनिमयदर बढेको छ। आज नेपाल राष्ट्र बैँकले १ अमेरिकी डलरको खरिददर ११६ रुपैयाँ ६ पैसा र बिक्रीदर ११६ रुपैयाँ ६६ पैसा तोकेको छ। त्...
शेयर बजारमा नेप्से ६ प्रतिशतले घटेपछि सर्किट बन्द
फागुन १९, २०७६, सोमबार
काठमाडौँ । सोमबार शेयर बजारमा नेप्से परिसूचक ६ प्रतिशतले घटेपछि सर्किट लागेर बन्द भएको छ। यो साताको सुरुवात मै अर्थमन्त्री डा। युवराज खतिवडा राष्ट्रिय सभामा नरहने भएपनि अर्थमन्त्रीमा निरन्तरता पाउने समाचार आ...